:::CARRUURTA SOOMAALIYEED :::
MUSTAQBALKA - CARRUURTA
(SomaliTalk, May 6, 2001) - Maxaa xal u ah ubadka Soomaaliyeed? waa su'aal uu soo jeediyey Abdiraxmaan Al-Kanadi mar uu shalay ka hadlay xaflad aad loosoo agaasimey oo laguqabtay magaalada London ee dalka kanada.
Cali Jaamac iyo labo kamida Carruurtiisa [Baaraka Allah]
Xafladaas dadka kasoo qaybgalay badankoodu waxa ay ahaayeen Soomaali, waxaa kale oo kasoo qaybgalay cadad Muslimiinta kale ee kudhaqan magaalada, waxaana indhahaygu qabteen dad u dhashay Kanada iyo Nayjeeriya.
Xafladan qado-sharfta ah waxaa soo agaasimay Cali Jaamac oo katirsan Soomaalida ugu firfircoon magaalada marka laga hadlayo isku xirka iyo hurumarinta jaaliyada Soomaaliyeed ee kudhaqan magaaladan.
Qadadii kabacdi, waxaa muslimiintii halkaas isugu timid isugu hambalyeeyeen kulankaan qiimaha badan ee ay isugu yimaadeen Muslimiinta kukala dhaqan cirifyada magaalada. Waxayna halkaas isku weydaarsadeen talooyin ku aadan bulshada Islaamka ah ee ku dhaqan magaalada.
Dadkii halkaas ka hadlay waxaa kamid ahaa cabdiRaxmaan Al-Kanadi oo ah nin Muslim ah isla mar ahaantaana hadda haysta dhalashada Kanada (Canada) laakiin asalkiisii kayimid dalka Taylaan (Tailand), waxaana uu soo Islaamay toban sano ka hor.
Qayb kamida Muslimiinta xaflada kasoo qaybgashay
Wuxuu hadalkiisii ku bilaabay isaga oo dhehaya "Dhaqanka Soomaalidu wuxuu aad ugu dhowyahay dhaqanka Tailand, marka la eego dhar xirashada waxay Soomaalidu qaataan macawisaha, sidaas oo kalena reer Tailand wey xirtaan macawisata". "Xaqiiqadii waan kululaaday maanta, markaas ayaan macawis xirtay" ayuu yiri. Isagoo arrintii dhaqanka weli ka hadlaya waxa uu yiri "Cuntada ay xaaskaygu kariso waxa ay isku dhadhan yihiin cuntadaan aan halkaan maantu ku cunay".
Cabdiraxamaan oo hadalkiisii sii wata waxa uu yiri " waxaa Soomaalida deggan London (canada) waajib ku ah ama la gudboon in ay qorsheeyaan sidii ay marwalba u yeelan lahaayeen kulama iyo isu imaadyo joogto ah, sida kan oo kale, taas oo looga gol-leeyahay in lagawada tashado arimaha guud ee mujtamaca Soomaalida, gaar ahaan carruurta".
Shariif Maxamad Cumar
Wuxuu cabdiraxmaan hadalkii ku adkeeyey isagoo dhehaya waa in aad ku dadaashaan ilaalinta, xafidaada iyo dhawrista dhaqanka ubadka soo koraya. Waxaa uu yiri " waa waajib idin saaran sidii aad ubadkiina u badbaadin lahaydeen, u xafidi lahaydeen dhaqankooda, u bari lahaydeen diintooda, ugu baraarujin lahaydeen dhaqanka suuban iyo asluubta toosan."
Cabdiraxmaan waxa uu walaac kamuujiyey khatarta soo foodsaarikarta dhaqanka carruurta yaryar haddii aan hadda xil weyn la iska saarin ama laga gaashaaman. Waxaana uu muujiyey in cabasho aysan waxba taarayn, balse loo baahanyahay ficil looqaado jihada wanaaga. Arintan oo la isku raacay in ay tahay arin aad muhiim u ah, in sidegdeg ah wax looga qabtona ay tahay lagama maarmaan.
Waxaa kale oo halkaas ka hadlay Yusuf Cusmaan oo kamida odayaasha magaalada iyo guddoonka jaaliyada Soomaalida London, waxa uu qiray in arinta Cabdiraxmaan sheegay ay tahay mid u baahan muhiimad gaar ah iyo xilqaan weyn. Waxaana la gudboon, ayuu yiri, Soomaalida in ay arintaan ku dhaqaaqaan hirgelinteeda sida ugu dhaqsaha badan ee macquulka ah.
Qorraxda oo aad u kululayd ayaa keentay in sawiradii aysan siwacan u soo bixin ee raali kanoqda.
Waxaa kale oo halkaas ka hadlay Shariif Maxamad Cumar oo kamida caaqilada magaalada, waxaana uu hadalka akhyaartii ka horeysey kudaray in arinta carruurta yaryar ay tahay mid xilkeeda ay saarantahay waalidka. Waxaana loo baahanyahay ayuu yiri in aan sinaba loo dhayalsan arintaan waxkaqabadkeeda.
Rag kale oo badan ayaa goobta kasoo jeediyey talooyin dhaxalgal ah, waxaana dhammaantood arintu isugu soo biyo shubanaysey sidii loogu dadaali lahaa badbaadada dhaqanka toosan ee ubadka soo koraya, tan oo loo arkay muhiimad aan waqti dheer sugayn haddaan hadda lagu dhaqaaqina la gaarayo heer aan hadhow wax laga qabankarin. Waxaana lasoo jeediyey in ugu horayta labilaabo kulamo joogto ah oo ay yeelan doonaan jaaliyadu si arintaan xal rasmi ah loogu helo.
Dabcan waxaa la cadeeyey in ay jiri jireen kulamo joogto ah oo jaaliyadu yeeshaan, laakiin qorshahan cusub waa mid ku jihaysan ubadka iyo dhallinta da'da yar. Waxa kale oo cad in arrinta dhaqanka carruurta da'da yar ay saamayn ku leedahay dhammaan jaaliyadaha Soomaalida qurbaha.
Cali Jaamac oo casumaada u fidiyey jaaliyada ayaa halkaas isaguna uga mahad celiyey dhammaan muslimiintii halkaas isugu timid.
London, Ontario waxa ay kutaalaa qiyaastii 200km koonfurta Toronto, waxayna 200km Woqooyiga ka xigtaa Magaalada Detroid, Michigan. Tirada dadka kunool waxaa lagu qiyaasay inta u dhexaysa 300,000 ilaa 330,000 qof, muslimiinta magaalada deggana waxaa lagu qiyaasaa 30,000 qof. Magaalada waxaa kuyaal laba masaajid oo waaweyn iyo madaraso Islaami ah oo layiraahdo London Islamic School.
Tiro ahaan Soomaalida deggan London, Ontario aad uma badna, marka la barbardhigo magaalooyinka kale ee W/Ameerika, laakiin waa dad aad u nidaamsan marka ay noqoto habka waxbarashada carruuntooda, waxaana ay leeyihiin dugsi ay carruurta ku barbaaray qurbaha iyo tarbiyada Islaamka halkaas oo uu bare ama macalin kayahay Shiikh Xasan.
Duqsi quraalka London, canada
Waxaakale oo jaaliyada Soomaalida London ay leeyihiin Urur mideeya oo u dhexeeya dhammaan Soomaalida, ururkaas oo lagumagcaabo Ururrka jaaliyada Soomaalida London oo loosoo gabiyo SAL.
Qore: Mohamed Ali | webmaster@somalitalk.com
Soo Booqo Bogga Macluumaadka Islaamka: GUJI SomaliTalk.com/Islam